Cayaar jimicsi, firfircoon oo wax ku ool ah: Kubadda Cagta | Ragga Stylish
Muxuu yahay cayaarahaani? Kuwa ay barnaamijyada tababarka waxaa loogu talagalay ujeedooyinka la qorsheeyay. Fikradda waa in kor loo qaado xirfadaha jirka. Waxaa ka mid ah, adkeysiga muruqyada iyo neefsashada, adkeysiga wadnaha, isu dheelitirka, dabacsanaanta, xoogga iyo awooda, xawaaraha, dhaqaaqa, iwm.
Waxaa jira qaabab kala duwan oo loo yaqaan 'Crossfit Football'. Mid ka mid ah waa midka loogu talagalay carruurta, midka lagula taliyay haweenka ama Crossfit Tabata, iyo Crossfit Football.
1 Jimicsiyo kala duwan
2 Waa maxay nooca loo yaqaan 'Crossfit Football'?
3 Asal ahaan
4 Barnaamijyada Kubadda Cagta
Jimicsiyo kala duwan
Barnaamijyada Kubadda Cagta waxay ka kooban yihiin jimicsiyo la mid ah kuwa aad ku sameyso nolol maalmeedkaaga. Iyo kuwa kale oo xoog badan, si loo helo qaab jireed oo wanaagsan. Barnaamij jimicsi oo kala duwan ayaa loo qaabeeyey maalin kasta.
Sidee loogu dhaqmaa Kubadda Cagta? Muhiim maahan inaad yeelato xarumo gaar ah, kaliya jirkaaga iyo rabitaanka inaad bilowdo. Qaar ka mid ah maacuunta aasaasiga ah, sida xargaha caagga ah, culeysyada ama walxaha qaadista, xargaha, iwm.
Waa maxay nooca loo yaqaan 'Crossfit Football'?
Xagga waxa loogu yeero Kubadda cf waxay ku saabsan tahay jimicsi xoog leh, xoog iyo xawaare leh. Sida noocyada kale ee isboortigaan, waxay ku saabsan tahay jilitaanka layliyada lagu sameyn doono kubbadda cagta.
Waqtiga xaadirka ah, el Kubadda Cagta waxaa loo sameeyaa xitaa heerar xirfadeed, marka laga hadlayo ciyaartooy caan ah.
Qaabkan tababarka ku dhashay ku saleysan cilmi baaris ku saabsan tababarka ciyaartoyda NFL, Horyaalka Kubadda Cagta. Aynu xusuusano inay tahay horyaalka ugu weyn xirfadleyda Mareykanka ee kubbadda cagta Mareykanka.
Waxay ku saabsanayd soo bandhig jawaab ciyaartoy xoog leh, firfircoon oo dhakhso leh kubada cagta Mareykanka. Isboortigan, waxqabadka ugu badan ayaa loo baahan yahay xitaa xaaladaha xaaladaha jir ahaaneed ee xad-dhaafka ah.
Barnaamijyada Kubadda Cagta
uu barnaamijyada tababarka ee adeegsanaya aqoonta uu orodku horey u lahaa. Waxay raadineysaa inay hagaajiso calaamadaha-bayoolajiga isla markaana lagu gaaro waxqabadka ugu sarreeya isboortiga gaarka ah ama xirfadda.
Markaad bilaabeysid fasalo kubada cagta ah Waxaa lagugula talinayaa inaad horey u sameysay ugu yaraan laba bilood kahor. Kubbadda cagta dhexdeeda waa inaad si tartiib tartiib ah u bilowdaa oo aad u kordhisaa tababarkaaga marka aad sii socoto
Ilaha sawirka: CrossFit Codso / YouTube
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Ma ogtahay waxa loo yaqaan 'Crossfit Football'?